नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले रू ५८ करोड ९२ लाख खुद नाफा कमायो – Digital Khabar
१६ बैशाख, काठमाडौं ।नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. ५८ करोड ९२ लाख ८९ हजार खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको यसै अवधिसम्म रू. ५८ करोड २० लाख ७० हजार थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष बैंकको नाफा १ दशमलव २४ प्रतिशत बढेको हो ।
बिहीवार सार्वजनिक बैंकको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण अनुसार वितरणयोग्य नाफा भने रू. ४६ करोड ३२ लाख ५६ हजार रहेको छ । गत वर्षभन्दा शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत बढी रू. ८३ करोड ५५ लाख ३९ हजार सञ्चालन नाफा गरेको बैंकको कुल सञ्चालन आम्दानी १ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत बढी रू. ९३ करोड ७२ लाख १ हजार भएको छ ।
तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकको अन्य विभिन्न कोष सहित जगेडा कोष रकम गत वर्षभन्दा ४५ दशमलव ९२ प्रतिशत बढी रू. २ अर्ब १५ करोड ३६ लाख ३७ हजार रहेको छ । यस अवधिसम्म बैंकले गत वर्षभन्दा २३ दशमलव ७९ प्रतिशत बढी रू. ३० करोड ९४ लाख ६५ हजार निक्षेप संकलन गरेको छ ।
२७६ दशमलव ६३ प्रतिशत बढी रू. २ अर्ब १९ करोड ५६ लाख ३८ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत वर्ष यो अवधिसम्म बैंकले रू. २५ करोड निक्षेप संकलन गरेको थियो भने रू. ५८ करोड २९ लाख ६२ हजार कर्जा प्रवाह गरेको थियो । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ५ दशमलव शून्य २ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११० दशमलव ७७ रहेको छ ।